Seenaan Oromoo Akka Janus Fuula Lama Qabaa Laata?
Posted: Adoolessa/July 16, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (12)
Fayyis Oromia Irraa*
Barreffamni kun kan ani Afaan Oromootiin yeroo duraaf dhiyeese waan ta’ef, yoo dogoggorri keessa jiraate na ofkolcha. Akka ani amma Afaan Oromootiin yaada koo dhiyeesuu yaalu na kakaase, deebisaa Obbo Abdii Boruu barrefama koo tokkoof kenne dha: http://gadaa.com/oduu/20777/2013/07/13/kennaan-dandeettii-fi-beekumsi-oromoo-kan-fedhii-saba-oromootiif-hin-taane-ykn-hin-oolle-hiikkaan-isaa-maali/. Duraan dursee Ob. Abdii waan lamaaf galateefachuun barbaada: tokkoffa yeroo hunda yaada isaa Afaan Oromoo bareedaa, midhaawa fi qulqulluu dhan nuuf dhiyeesuu isaaf; lammaffaa ammoo bareeffama koo sana irratti akka Oromoo tokkotti kabajaa fi naamusaan qeeqa kennuu isaaf. Keesattu namummaa koo fi yaada koo adda baase ilaaluun isaa namoota hedduu bareeffama sana dura-dhaabbatani na shakkani fi na yakkan irraa adda isa godha. Fakkeenya gaarii ta’uu isaatiif ulfina guddaa qaba; na birattis ni kabajama.
Itti aansee, waa’ee Janus xiqqo ibsuun yaala. Maqaan kun ‘mythology’ Greek keessatti waaqa Rome tokkoof kan kename dha. Fuula lama qaba jedhame himama: fula jalqabaa (alpha) fi fuula xumuraa (omega). Suuraan isaaf kennamu garri caalu mataa nam-tokkoo, fuula lama waliin, argisiisama. Fuulli lamaan sun wal haa fakkaatani ykn wal hin fakkaatiin ani himuu hin danda’u. Akka asitti (http://de.wikipedia.org/wiki/Janus_(Mythologie) argisiisame yoo ta’e, wal fakkaatu jedheen yaada. Ani garuu yoon seenaan Oromoo fuula lama qabaatinnaa laata jedhee gaafadhu, fuula garagaraa lama jechuu koo ti. Maaliif akkan kana gaafadhe, yaada ani asitti barreessuu yaalu irraa hubatama jedheen amana.
Bareefamni koo qeeqame sun akkasitti awwaara kaasuun isa karaa tokko na gaddisiise, karaa biraa ammoo na gammachiise. Kan na gadisiise, jarjarsuudhaan maxxansuu irraan kan ka’e waan xixiqoo irraa of qusachuu dhiisuu koo ti. Barreefamni kun wagga lama dura “Ethiopian Review Forum” irratti barreefame malee, akka ‘article’ tokkootti, hamma dhumaatti itti hin yaadamne ture; waan ani dhiyeenya kana deebisee bareefama “Jawarawi Harakat …” jedhu keessatti kaaseef, namni biraa fide akka yaada (comment) godhee maxxanse. Namni na beeku tokko ammoo yaada kana dubbisee, “kun mataan isa akka ‘article’ tokkotti otuu maxxansamee dansaa dha” jedhee yaada naaf kenninaan jarjarsuu dhaan maxxansiise. Jarjarsuu kana keessatti, maqaa kutaa tokkoo (Shoa) fi maqaa namoota kutaa sana keessaa akka fakkeenyatti kennuun koo akka dubbistoonni hedduun jallaatti na hubatan godhe. Warri akkas na hubataniis na shakkuu fi na yakkuu filatan. Kan na gammachiise ammoo, namuu yaada isaa garagaraa dubbii sana irratti kennatee mariihachuu isaa ti.
Mee amma gara yaadaa akkas nu afaanfaajesse kana haa ilaallu. Akkan shakkame sana, ani Oromoo kutaa tokko yakkuuf hin barreessine, hubannaa ani seenaa Oromoof qabu keessaa xiqqo calaqise malee. Namoonni ani akka fakkeenyaatti kennes waruma sammuu kootti dhufan malee, itti yaadee isaan fileen miti; otuun yeeroo fudhee itti yaadera ta’ee akkas hin godhu ture; kanaaf jarjarsuun sun waan dogoggora fakkaate kana uume. Garuu akkas nu mariihachiisuun isaa ammoo, “bagan jarjaree maxxansiise” na jechisiise. Gaariis haa ta’u hamaa, yaadni ani dubbistoota irraa arge, hawaasa keenyaaf barumsa waan ta’u dha jedheen amana. Yaadni ani hamma ammaatti barreessaa ture hundi, hawaasa Oromoo mariihachiisu irra kan darbe, akeeka biraa hin qabu. Seenaan Oromoo ammoo, akkumaan afaan Inglizitiin ibsaa ture, akka Janus waan bifa (fuula) lama qabu fakkaata; isaanis:
– ‘Core-Oromianist narrative’ (seenaa isa warri ‘decolonization of Core-Oromia’tti amanan himani). Fuulli seenaa kun kan seenaa Oromiya isa faalla seenaa Abyssinia ta’e ibsu dha. Fuula kana kan qaban warra Core-Oromianist ta’anii seenaa Oromoo akka saba aadaa guddaa fi bulchinsa gaarii qabaachaa ture, garuu kolonii Abyssinia jalatti kufetti himan. Isaan kun Oromoo warra “I am Oromo first; Ethiopia is imposed on me” jedhu hunda hammata. Seenaa isaan himan, Oromoon saba Kush yoo ta’u, Habeshaan ammoo saba Semetic akka ta’e fi biyyooleen laman (Abyssinia fi Oromia) ollaa akka ta’an ibsa.
– ‘Great-Oromianist narrative’ (seena warri ‘democratization of Great-Oromia’ sammuutti qabani). Fuulli biraa kun, isa seenaa Oromiya fi seenaa Abyssinia walitti fiduu yaalu dha. Warri fuula kana calaqisan warra Oromoo akka saba biyya Ethiopia jedhamtu kana wagga 3000 bulchaa turreetti dhiyeesani. Isaan kun warra “I am Oromo, who contributed a lot in building the current Ethiopian state” jedhu. Seenaa isan himan kan warra Kush/Meroe waliin wal qabatee biyya lamaanuu (Abyssinia fi Oromiya) hammata. Oromoo warri “federation dhugaa fiduuf qabsoofna, yoo barbaachises maqaa union kanaa Great-Oromia baafna” jedhan fuula seenaa kanas ni keessumsiisu.
Yoo fakkeenyaaf seenaa keenya yeroo waraana addunyaa II, bara lolaa Xaliyaanii waliin goone (Oromoo gar tooko Xaaliyaan lolani, kaan ammo Xaaliyaan faana dhaabbatanii Habashaa lolan) fi Oromota nafxaanya Minilik ta’anii lafa argatan tokko-tokko ilaallu, gaaffiileen ka’uu malan: fuula lamaan kana akka seenaa Oromootti fudhachuu dandeenya moo tokko filachuu qabna? Bifa lamaan kana keessaa tokko jajuu fi kan biraa xiqqeessuu qabna moo lamaanuu qixa ilaaluu dandeenya? Yoo tokko filanne hoo, maaliif filanna? Fuula lamaan walitti fidnee, achi keessaa seenaa waloo tokko baasuu ni dandeenya?…kkf dha. Keessattu warri siyaasa Oromoo gaggeessu, seenaa tokko yoo dhiyeesan, akka mul’ata isaanii tajaajilutti ta’uuf itti yaadaniitu. Kanaaf natti fakkaata, qaamonni siyaasa Oromoo warri “federeshina dhugaa ijaarra, Ethiopia keessatti Oromiyan of bulchuu qabdi” jedhan, seena lamaanu kan keesumsiisan. Achirra ka’aniitu kaayyoo ‘Ethiopian Federation ykn Kush Federation ykn Oromian Federation‘ jedhu qabatanii kan deeman. Deegartoonni yaada kanaa gar-tokko, yoo furmaata yeroo dheeraaf ta’u barbaanne, “maqaa federation ijaaruuf deemnu sana Oromiya haa baasnu” jechaa jiru. Yoo kana goone, gara fulduraatti, “Oromootu Ethiopiawinet fudhata otuu hin taane, Habashaatu Oromiyawinet fudhata” jedhanii amanu.
Amma gaaffilee Ob. Abdii kaasee sana gaggabaabsee deebisuuf: yoon loltoota Semien fi Tigrai jedhu, loltuun Abyssinia bakka biraa (Gojjam, Gondar Kibbaa fi Lasta) Minilik II faana hin turre jechuu koo miti; loltoonni isaa hedduun garuu Shoa kaabaa keessaa ta’uu waan haallu natti hin fakkaatu; loltuun Tigrai ammoo Oromiya keessatti kan heddummaatte erga 1991 as malee, isa dura hin turre; “mooraa diinaa keessa kan hojjete hundi meeshaa fi gantuu dha” waan jedhu kun sirrii natti hin fakkaatu; moora diinaa keessa taa’ani firaaf hojjechuu fi miidhaa tokko lammii irratti otuu hin dalagiin jiraachuunis numa jira; ani barrefamaa koo keessatti kutaa Oromoo tokko yakkuu hin barbaanne, yakkamtoota Oromoo hundas qulqulleessuunis feedhii koo hin turre; garuu namoonni yaada koo dubbisan gar-tokko warri akkasitti na hubatan, otuu irra deddeebisanii yaada koo dubbisanii nan gammada; fakkeenyi kubbaa miillaa Jarman fi Poland sun yaaduma koo ibsuuf malee, taphatoota sana namoota haala siyyaasa keessa jiran wajjiin wal qixxeesuuf miti; Dr Fikre seena kan waggaa 3000 barreesse, ani ammoo kan waggaa 300 duwwaan ilaale, kanaaf yaadni keenyi lamaan wal hedduu wal hin fakkaatu.
Waanuma fedheefuu, awaara dheekkamsaa fi marii ho’aa akkasi kaasuun sun milkaa’ina barreefama sanaa argisiisa. Marii godhame hundatti ani gammadeen jira. Barreeffama dhihaatan keessatti, qabxiileen tokko-tokko namoota mariif akka kakaasuutti, yoo barbaachise akkas ‘provocative’ ta’uun barbaachisaa dha. Dubbistoonni gar-tokko garuu, waanuma yaadni koo isaaniif hin liqimsanneef jecha, waan ani “hammina dhoksaan” deemu fakkeessanii himuu barbaadan (they wanted to make a diagnosis of my “evil intention”). Kun dogoggora keessa isaan buusa malee, waan ani deemuf beekuu isaanii hin argisiisu. Gara fulduraafuu, akka Ob. Abdii godhe kana yaada mormuu fi xiinxaluu irratti otuu xiyyeefatanii gaarii dha. Hunda caalaa ammoo, ani yaada koo barreessee kaniin maxxansuu “barsiisuuf” miti, yoo namoonni yaada irratti kennan deebisee achi irraa barachuuf malee. Deebi’ii ani barreefama sanaaf argadhe garuu kan nama ajaayibu: dubbistoonni gar tokko “this is collective criminalization” jedhanii akka ani Oromoo kutaa tokkoo yakketti hubatan; warri kaan ammoo “this is collective de-criminalization” jedhanii akka ani yakkamtoota qulqulleesuu yaaleetti na fudhatan. Bareeffama tokkoof bifa wal hin simmanne lama kennan. Kan ani gochuu barbaade garuu, “importance of critical history” argisiisuu ture; “politicized history” hunda of waga’uu dhiisnee, ija qeeqaatiin seenaa keenya haa ilaallu jechuu koo ti. Hunda caalaa garuu, yoo akka dogoggoraatti fudhatame, maqaa kutaa Shoa duwwaa kaasuun koo, olola diinaaf karaa akka bane arguu dandaheen jira.
Diinni Oromoo qaawa akkasii yoo argattu, akka titiisa raqa argattee itti gammaddi; sanattis fayadamtee Oromoo walitti naquuf tattaafatti. Oromoof garuu yaada addaaddummaa qabu bifa gaarii fi nagaan keesumsiisuun haaraa miti; abbootiin keenya sirna Gadaa keessatti Odaa jala taa’anii akkasitti mariihachaa fi yaadaan wal dura dhaabachaa turan; ni wal dhaggeefatu ture, ni wal dandahus; abaarsii fi arrabni dubbii Oromoo keessa hin jiru ture. Gumii Gaayyoo keessatti Oromoon yaada garagaraa hundaaf bakka kenna; yaada walii ugguruun hin jiru; namuu seenaa fi kaayyoo addaaddaa sodaa tokko malee gadi baasee hima, mariifis dhiyeessa; “tolerance of diverse opinions” akkasii kun aadaa Oromoo keessatti beekamaa dha; maaliif kana barreesite ykn dubbatte jedhani wal yakkuun hin jiru ture. Seenaan garuu kan akka dhugaatti fudhatamu yoo waan dhugaa fakkaatu keessa jiraate dha; maaltu dhugaa dha, kamtu dhara jedhani irraa mariihachuun waanuma jiru. Anis waanuman dhagahee fi dubbise irran barreese; yoo dhugaa hin fakkaanne ykn ammoo kan qabsoo bilisummaa Oromoo miidhu ta’e, yaada akkasi dura dhabbachuun rakkina hin qabu. Walumaa galatti, ergaa ani barreefamoota koo dhiyeenya kana maxxanfaman keessatti dabarsuu barbaade, “Oromummaan duula warra Ethiopiawinet leellisuun godhamu irran kan ka’e laafuu hin danda’u ykn bishaawuu hin qabu” kan jedhu ture. Afaan Inglizitiin gababsee kaahuun yoo barbaachise:
The campaign of Ethiopiawinet (Ethiopian nationalism) to dilute Oromummaa (Oromo nationalism) is a futile exercise. If the territorial integrity of the union is chosen to be kept intact by the Oromo people, then we now need to move on and struggle to realize the following five important virtues: 1) Democracy, including the national self-determination, to be the future rule of the political game in the federation/union; 2) Afaan Oromo to be the primary working language of the federal government; 3) Freedom from the hegemonist Woyane and from any sort of national domination; 4) Odaa to be the central part of the flag for the union; 5) Great-Oromia (land of the braves) to be the name of the future true federation, replacing Ethiopia (land of the burnt face). Only the fulfillment of these five parameters can be the possible guarantee for the future long-lasting multinational federation. If the other nations, including the Abyssinians, fail to accept this demand and/or offer, the further push for an independent republic of the Core-Oromia is inevitable. It is up to them to choose an integrative Great-Oromia in order to avoid the disintegration of the union, which will be caused by an eventual independent Core-Oromia.
Dhuma irratti gaaffii Ob. Abdii isa guddaa sana deebisuun yaala. Inis akkas jedhee gaafate: “kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle hiikkaan isaa maali?” Hiikkaa isaa sirriitti arguuf waan lama adda baasuu qabna: hiikkaa kennaan akkasii lammiif qabu fi hiikkaan inni nama sanaaf qabu. Kennaan, dandeettii fi beekumsi nama akkasi kun, fayidaa lammii fi saba isaaf hin oolle malee ofi isaaf qabeenya guddaa dha. Nammoota akkasi kana irraa dandeettiin isaani mulqamuu hin qabu, ammoo garee hin taaneef akka oole himuun barbaachisaa dha. Yoo kennaan kun yakka lammii ofii irratti hojjechuuf oolee jira ta’e, ragaa dhiyeessuudhaan himamuu qaba. Ergaan ani barreefama sana keessatti dabarsuu yaales kanuma. Dandeentii dhuunfaa namoota akkasiif beekumsa kennuu jechuun, yakka isaanii irraa dhiquu jechuu miti. Yoo yakka hojetanii jiru ta’es, “they are simply well talented criminals”. Kanaatii achi, haala amma keessa jirrutti yoo fuula Janus (seenaa Oromoo) lamaan keessaa tokko dhiisnee, isa kaan duwwaa ilaalle, kun garaagarummaa ilalchaa ti malee yakka miti. Ani fuula isaa tokko yoon arge, Ob. Abdii ammoo isa bira yoo ilaale, lamaan keenyu mirga qabna. Kanaaf jenne wal hin balaalefannu, hin abaarru, hin yakkinu; hunda caalaa ammoo Rabbi/Waaq keenyas akka nuti wal hubannu numa nu gargaara; haa jabaannu!
Jul 16, 13 at 1:52 pm
Deebii gaarii dha. Dhimma tokko karaa/kallattii lamaan ilaaluun waanuma jajjabeeffamuu qabu ta’ee osoo jiruu dubbiin micciiramee dhihaatus gaarummaa hinqabu. Obbo Fayyis, waa’ee ummatichaa yeroo kee fudhattee qorannaa ati godhaa jirtu ni deeggarra. Garuu yaadotni ati kaastu fedhii fi ulfina Oromoo giddu-galeessa godhatanii ijaaramuun dirqama. Yaadotni kee haala qabatama yeroo ammaa ummanni keenya itti jiru irratti xiyyeeffachuu qaba malee gara ilaalcha (philosophy) dhaaba siyaasaa tokkootti qofa nu dhiibuu hinqabu. Adeemsikee yeroo hunda, garee siyaasaa tokko leellisa.
Gama birootiin immoo waa’ee warra “shawaa” sanaaf deebiin ati kennite quubsaa miti. Waan garaa keessaa qabdu erga baafattee booda “lakkii akkas jechuun barbaade” yoo jette fudhatamni isaa hagam madaala kaasa sitti fakkaata? Yaadni kee dogongoruu kee ibsa osoo hintaane ilaalcha gareeleen tokko tokko mana keessa “guunguman” tokkotu tasa si harkaa utaale malee. Waan kana caalu iyyuu namootni tokko tokko yoo dubbatan ni dhageennaa mii? Durumaanuu waa’ee naannummaa kaasuun maaliif dhalate? Moo isa warri keenya “gurri seexanaa hindhagayiin” jedhanii waan tokko gadi qabanii dubbatantu amala sitti ta’e?
Waanuma hundaafuu, daftee dubbichatti xiyyeeffannaa kennuun kee bareeda. Ergaan ati dabarsites “waliin mari’achuun, xiinxaluun, walmormuun, walqeequun,…kkf” sammuu keenya nuuf bal’isa, walitti nu dhiheessa malee miidhaa hinqabu. Dhugaa, haa jabaannu!
Jul 18, 13 at 1:18 pm
Obbo Fayyis Oromiya(Welbsi)
akkuma atuu Jette yaraas ta’u gaarii namni waan hojjeteen waamamuu qaba haalaa fi yeroo isaa eeggatee. Sababni kun ta’uuf
ilmi namaa dhaabbatee hin hafu,Yeroo lafa kana irra jiruutti yaraas ta’ee
gaarii ojjeteetu bira dabra.Dhaloonni itti aanu ammoo dabaree isaa irraa
fuudhatee bakka inni dabare itti dhaabe irraa fudhatee laafina namoota isa dura
turanii jabinatti jijjiraa,jabina isaanii irraa waa barachaa hojii isaa itti
fufee, innis dhaloota itti aanuuf dabarsa.Kanaaf inni yakka ojjetes kan waan
tolaa ojjetes hojii isaatiin kaafamuun hin oolu.Garuu akkatti kaafamuuf yeroo kaafamu qaba.Namni isaan waa yakkan
jedhee qeeqaa kaasu yookan balaalefatu garuu waan isaan irra wayyaa(toltuu)ta’e ojjetee agarsiisaa yoo ta’e namtti tola .Namni illee irraa waa barata.
Warri atiyakkamtoota jettee waamte kun yeroosanatti akkuam atuu Jette nam tokkeen yakka garagaraa ojjetaniiru ta’a.Haa ta’u oromootuma
naannoo tokkoo qofatu yakka ati jettu kana keessaa qooda fudhachaa ture
Moo kaayyoo dhokataa, kan namoota akka kee waliin haasa’aa turte duula oromoota naannoo tokkoo kanatti xiyyeefate ,barreeffama kee tuffii guddaa guutamte kanaan darbatee?
ariifannaan waan kana maxanse malee Oromoota kuntaa tokkoo yakkuuf mitii
jette??? Ajaa’iba Maaliif waan kana irra deebitee akka jette naaf hin galu??
Waanni kun waan lafa jala itti qophooftee ,
Miniliki ,Hayile fi Mangistuun iyyuu Oromoota Shawati jettee kaa’uu irra dabartee Seenaa Oromummaa Oromoota naannoosanaa irraa kaasuuf yaaltee jirta. Qabsoon Oromoo gita bittaa Amhara irratti godhamaa ture suni akka sirrii hin taane ibsuufi yerooma amma yeroo Amhaarrii akka saree nutti
dutaa ooltuu kana ati ammoo oromoota gidduutti ibidda olalolaa qabsiisuuf waan kijibaa kana barressitaa. Oromoo gidduu galaa irraa diinummaa qabdaan ati qabdu jira moo Kaayyoo dhaba keessanii dhihoo kana bixilattanii Ethopia haaromsuf deemtan , Gaaffiif deebiin dhihoo kana gogodhamaa jirtu kan nuti oromoota biyyi keenya oromiyaa jettu Ilmaan oromoon deemaa jirtu isin harkaa waan diigaa jiruuf garaan sigubatee Habashootaaf daboo ba’aa jirtaa? Halkanii guyyaa paltalk kessaa Welbsii maqaa jedhuun lallabaa akka ati ooltee bultuu ni beeknaa.
Gobanaa jedhuu kanaan Oromoota gidduu galessa ta’an warra oromummaaf of kennanii qabsoo Bilisummaa oromootti dabalaman karaa isiniif mijate hundaa itti duultanii dhaaba kana keessaa abdii kutachiisun akka inni summaa’ee ba’u gochaa turtan kaan ammoo harka lafa jalaatiin diinaaf dabrsitanii kennaa turtan .Amma ammoo badii diinnii nurratti godhee hunda Oromoota Shawaati jettanii Habashoota qulqulleessaa jirtu. Boruu maal jechuuf deemtuu?
. Waan ati amma akkuma salphaatti barreessitee maxansite Kana ammoo waanuma manaafii yeroo wal geessan warra sifakkaatu waliin odeessitanidha waan ta’eef waanuma Sammuun kee ishiin Asdhihoon yaaddu Qalamni kees barreesite.Kun waan hedduu nama Ajaa’ibsiisu miti Tarii oromoota jechoonni kuni haaraa ta’eef jiraachuu danda’u ta’a, Jechoota Ati amma barreesite kana bara 1991 warri akkuma kee kanati Oromummaa afaaniin namaaf kennanii afanumaan nama irraa fudhaa turan,ammoo hogganoota qabsoo sabaati ofiin jedhan, Qaanii tokko malee afaan isaanii babaldhaa sanaan Warra fincaan miniliki Eega qabsoon dhumee dhuftan jechaa ittin qabsoo Oromoo keessaa nama galchaa turanidha.Leenchoo Lataa gaafa Oromoon gidduu galaa dhaabnii qabsoo bilisummaa Oromoo dhufee jedhee fardaan bahee sirbee simatuu, Shawaa akkanatti nu deggaraa jennee hin yaadnee Shawaa waranaan seennaa jennee yaadaa turree jedhee akka waan inni Dhiiga oromummaa geessee itti naqeettii haasa’aa ture .Otoodhuma jechoota hin taane darbattanii Galma qabsoo oromoo guddaa kana maadhee gandaatti galchitanii Mooraa qabsoo bilisummaa oromoo qullaatti ambiftan. Amma illee Amharaa fi Wayyaanetti maxxantanii kanuma godhuuf fakkaata kan yeroo diinnii oromoo Habashaa lamaan Oromootti duula jajjabaa deemsisaa jirtu kanatti waan akkana Oromoo kessa facastaan.
Fayyis oromiya???? Ajaa’iba maqaa keetii?? Oromiyaan ati
fayyiftu Ganduma ati itti dhalatte sana ta’innaa laata? ammoo warri bara Minilkiif bara Hayilee,Mangidtuu diinaaf ojjechaa turan sana yeroo akka oromoota naannoo tokkootti yakkitu sana Warra Summii qabsaa’ota oromootiif obboleessa
waliin dhalate dabalatee nyaachisuun fixe faa, Warra qabsaa’aa oromoo ajjeessee akka mirgaattii itti geeraru faa, Warra Yeroo ammaa kana keessa ani oromoodha jedhee gosa tokkoon of waamuu kiyya Ethiophian dhiifama naaf gootii jechaa boo’ee abashootatti harka kennatufaa ,Walumaan yakkuu qabdayyu .
Dhiisi Ilmoo bofaa irraa maal eegu summii malee????
Amma yeroo Habashoonni bitaaf mirgaa duula ajaa’ibaa ilamaan oromoo irratti
geggeessan jiran ,ilmaan Oromoos bakka jiranii duula kana dura dhaabbachaa
jiran ati fi fakkaatoti kee ammoo duulli keessan ilmaan Oromootti ta’e. Kuni sagantaa ODF kessa jira, harka kennaa keenya nu jala ballessaa Oromoon tokkummaan yoo ka’e , kana barressii addaan diigi siin jedhanii
gooftillee kee kan Oromoo diiguuf muyxannoo bara dheeraa qaban
Gochaan kee kun akka namni waan Habashaa dagatee summii ati facaafte kanaan qabamu dha.
siif warra akka kee yaada dhiphoo godina tokko irratti xiyyeeffate qabuuf,
ittiin dhalanne eenyu illee enyu irraa mulquu hin danda’u
Oromummaaf rakkate,madaa’e itti dhiige,jiruuf jireenya itti dhabe, hardha illee
itti dhabaa jira???? gaaffii jedhuuf namoonni dhoksuu yaalan illee seenaan
suutuma suuta baafti. kun waan afaan qofaan haasa’an otoo hin taane ragaan lafa taa’ee jira ta’a.
atiif warri yaada akka keetii kana qaban Eenyu illee Eenyuu gadi akka hin taane
Isindeemtanii deemtanii rakko somaleen itti jirtu nuttis fiduuf deemtu.Tuttuqaan
ammaatte kun amma obsan qabdi illee beekaa??
waa’een biyya oromiyaa Oromoota hunda ilaallati ,anatu siif beeka ,anatu caalaan keessan kan geerarsa afaaniitiin guutamte nu diige malee bu’aa inni fide
Oromoon giddu galaa ati akkanatti balalleffattuu fi Seenaa kijibaa waliigalaan itti maxxansitee yakkamtoota qofaan waamte kuni,
Ummata General Taddasaa, MagarsaaBarii, Gadaaa Gammadaa, Hailemariam Gammadaa, Argaw Dinaqaa, Mammoo Mazmir, Kabbadaa Buzinessh, Daniel Abebe, Sisay Ibsaa, Alamu Qixxessaa, Badhoo Dachaasaa Agarii Tulluu, Badhaadha Dilgaasaa Nagasaa Wagii,Irreessaa Caalaa faa fi Jagnoota ani lakkaa’ee fixuu hin dandeenye kaaleessa irraa amma baratoota oromoo hardhaatti biqilchitedha.
Ati fi ODF kee illee waan isin godhaa jirtan
lafeen gootota kana akka isin gafatuu shakkii hin qabu.
Jul 18, 13 at 10:39 pm
If you are talking about Walabsi (Great-Oromia) I know, he is the one who fought against the Amhara, whereas you fighting against Fayyis. Just check your facts! Why should you try to bite your Oromo fellow like the wild animal; Fayyis is entitled to his opinion; try to discuss the issue he raised. Only little brains talk about an individual for they can not discuss the issue at hand!
it sounds that you know the intention of Fayyis better than he knows himslef. Otherwise your accusation that he entertains only the philosophy of one side is wrong. He seems to be the only Oromo author, who tries to have a balanced approach towards both the liberation forces and the democratic federalists in the Oromo camp. You either didn’t read his all works or you just purposely try to discredit his effort!
Jul 17, 13 at 4:38 am
Which democratic federalist forces in Oromo camps are you mentioning? As an Oromo I know one Oromo Federalist Congress that has been ‘operating’ in Oromia/Ethiopia that is composed of ONC & OFDM. These former two parties have never put themselves in contrary to the objective of OLF (liberation force) any time. So, which force are you trying to indicate? And, how did you know the acceptance and popularity of these parties by the Oromo people (in relative terms) to make comparison between these two outlooks? I specifically question your grasp of the heart bit of Oromo the current Qubee generation!
The other point is, how on earth do you make the issue of ‘talented’ individuals in Habesha camp as a burning issue to be discussed on? An Oromo war general in Woyaane camp could be ‘talented’ (Habesha camp is almost the same). The skill & knowledge of this ‘general’ might have been helping the enemy (Woyanes) to kill Oromo liberation fighters. According to your analysis, we need to give credit/recognition to such criminals (more than the enemy) even if they kill us, simply because they have Oromo blood. Instead, the point should have been to have one general strategy to deal with enemy as a whole and focus on the main enemy by making, as necessary, debates on the way forward; however, specific tactical decisions/actions might be made as to how to deal with collaborators. This is not to give them more importance or to elevate their contribution to Oromo cause and open a forum of discussion about them as if they are critical or bottle neck for our struggle or as if such personalities are in a larger proportion in our society.
Therefore, the main reason why more than 95% of the readers opposed to your view was because your point of argument was out of touch and could not feel the heart bit of the Oromo people. As usual, you were also trying to recommend the importance of making another attempt of using the Ethiopian mask as if it was recommended universally or ordered by somebody with super knowledge about Oromo struggle and that we can’t attain the goal of Bilisummaa using our natural name, Oromo Liberation….!
Jul 17, 13 at 4:34 pm
surely you need to study Fayyis Oromia’s articles and opinions 3000X; all your allegations about him doesn’t hold water! Come with fact based criticism, after the study!
Jul 17, 13 at 6:17 pm
Obbo Fayyis Oromia, amma gara afaan Oromootti deebitee isaan katabuun kee baayyee gaarii dha. Akkanumatti akka itti fuftu ni abdanna. Waraqata kee isa kanaan duraa sana keessatti waan dogoggora hedduu gooteef, amma isa keessaa gartokkee fudhattee dhiifama gaafachuun kee cimina kee argisiisa. Garuu dogoggoorri kee akka ati amma jettee fi akka namoonni keenya baayyeen isaanii si qeeqatan jedhan sana, waa’ee “Shawaa” yookiin “godina” wayiitii miti. Balleessi kee inni guddaan seenaa Oromoo fi seenaa Amaaraa akka ati jettutti kan waggootii 300 tokko gochuu kee ti. Ati abbaa barbaadde gaafa barbaadde Oromoo goota. Ummata barbaadde gaafa barbaadde Kuush goota. Kanaaf isa Habashoota Kuushomsitu, isa afaan Amaaraa Kuushomsitu, Oromoomsitu kana nurraa dhaabi! Oromiyaas “Great Oromia” jechuun ishee nuti qabnu kana nu jalaa “Itoophiyaa” hin taasisini.
Barreeffama kee isa kanaa olii keessatti “Dr Fikre seena kan waggaa 3000 barreesse, ani ammoo kan waggaa 300 duwwaan ilaale, kanaaf yaadni keenyi lamaan wal hedduu wal hin fakkaatu.” Obboleessa koo isuma waggaa 300 kanaatu dogoggora. Oromoonni “Shawaa” ati jettuu kun matumaa seenaa waggaa 300 Amaaraa waliin hin qabani.
Silaa ati warra Habashaatti “Great Oromia” kee fe’uuf haqa maalii qabda? Habashoota nuti warra Seemi ofiin jedhaniin, kan seenaan isaaniis akka ta’an lafa kaa’u ati sanyii isaanii diddiirtee lakkii isin “warrta Kuushi” jechuuf haqa maalii qabda? Kun hundumtuu mee Itoophiyaa kee, eeyyee haadha biddeenaa kee irraa fagaachuu diduufi. Ati seenaa Oromoo jajallifteef, Oromiyaan karaa walabummaa ishee irraa hin maqxu. Walabummaan ishees ni bula, ni tura malee homaa hin hafu. Ati feenan addoo (mask) Itoophiyaa sana uffattee adeemuuf haqa qabda. Garuu dhiitee bariitee isa nu uffachiisuuf hin dama’ini. Waan hundaafuu waraqatan kanaan dura akka ati seenaa Oromoo irratti of sirreessituuf erge tokko kanaa gaditti maxxanseen jiraatii (“Ayyaantuu.com”, 11.07. 13, waraqaa Baran Bahan jalatti) ilaali. Nagaan jiraadhu!
Daannoo Garoo says:
Yaa obbo Fayyis Oromia, yaa obbo Talents, yaa obbo Bilise, yaa obbo —,
yaa obbo! Barreeffamni kee kan duraan mataa “Oromo Talents in the Habesha Political Clubs” jedhamu faa jalatta baafame, “ayyaantuu-com”, “gadaa.com”, “bilisummaa.com”
faa irratti baafamee ture. Garuu, ati torban kana guutuu waraqoota garaa garaa kan namootiin keenya waa’ee garaa garaa irratti dhi’eefatan irrattis akka nama yaada waa kennuutti “copy” gootee dhi’eessaa jirta. Ati waan feete, akka feetetti dhi’eeffachuun mirga kee ti. Garuu, yaada kee isa duraanii sana keessatti dubbii dhugaa irratti hin
dhaabbannetu keessa jira.
Obboleessoo ati namoota Oromoo hin taane, maaf Oromoo taasisuuf carraaqxa? Ajaa’iba Rabbi “Minilik Caalaa” jechuun faashisticha Amaaraa nuuf Oromoomsitee? Ati kana eessaa fidde? Ragaa qabatamaa maalii of-harkaa qabda? Mangistuu Hayila Maaramis oduu jette jettee yoo ta’e malee akka inni Oromoo tahe ragaa qabatamaa
Dabalees inni ati waayee Afaan Amaaraa “someOromo groups in Shoa seem to have accepted and developed Amharinya since 1270 in relation to their acceptance of the Holy Book which has been written in Ge-ez; so they fostered Amharinya as the new language out of Ge-ez and Afaan Oromo; then it was given a moral upper hand being
the language of both the clergy and the royality; the Oromo elite, who accepted the religion and such royality revered Amharinya at the cost of Afaan Oromo; Minilik “Caalaa” of Shoa and co are the products of such process; being the carriers of this moral upper hand, Amharinya speaking Oromo groups started to feel superior to others and then tried to “civilize” their Afaan Oromo speaking siblings south to them.”,
jette kun matumaa sirrii miti. Akkuma jirutti dubbii sobaa ti. Kun seenaa Oromoo keessattis, seenaa Habashaa keessattis dhaga’amee hin beeku. Seenaa haaraan uuma kan jettu yoo ta’emmoo kun haqa keeti. Garuu, “kana anumatu uume” nuun jechuu qabda.
Afaan Amaaraa afaanota warra Seem keessa isa tokko. Firoomni/ warroomni isaa
afaanota: Tigree, Gi’iizii, Argobbaa, Guraagee, Adaree, Arabaa fi Hebruu faa waliini. Afaan Oromoo immoo akkuma beekamu Afaanota warra Kuush keessaa isa tokko. Obbolaan isaas Afaanota: Beejaa, Aga’oo, Afaar, Somaalee, Hadiyyaa, Kambaataa, Gede’oo, Koonsoo, Arbooree, Alaabaa fa’i. Afaan Amaaraa jechoota dhibba mee qaan, kuma meeqaan lakka’aman Afaanota Kuush irraa keessumaa Afaan Oromoo fi Afaan Aga’oo irraa ergifateerra. Afaan Oromoo irraa jechoota irgifachuun Afaan Amaaraa
damee Kuush isa hin taasisu. Kunillee waanuma afaanota mara keessatti argamu. Ammallee waraqoota kee keessatti Oromoon Shawaa fi Amaarri Shawaa seenaa dheera akka waan wajjin qabaniitti, akka waan empaayara Itoophiyaa kana wajjin ijaarrataniitti lafa keessa. Kunis ajaa’iba Rabbii ti! Baranammoo gurri keenya maal dhaga’uuf adeema laataa?
Oromoonni Shawaa ati jettu kun akkuma Oromoota biraa “Minilik Caalaa” kee sanaan dirree duulaatti mo’amanii Itoophiyaa kee ishee ati “Great Oromia” jechuun kiristinnaa kaaftu sana jala galani. Goobana Daccee kunis Oromoo Shawaa sana mara dhiisii gosumasaa Abbichuuyyuu hin wakkalu. Gantuun eenyumayyuu wakkaluu hin danda’u. Oromoon Abbichuus akka “Minilik Caalaa” kee sanaan dirree duulaatti cabe beektaa laataa? Adaraa kee ati utuu waa’ee tokko irratti waa hin dhi’eessin dursiitii seenaa isaa qoradhu!
Ati akkuma amma kanaa olitti obbo “Name”-iin jette akka naan hin jenne adaraa. Isan kanaa olitti dhi’eesse hundumaa waraqatoota kee isaan maqaa garaa garaa qabattee baafte sana keessa ilaali! Akkuman irrantti jedhe yaada barbaadde, waan barbaaddee irratti dhi’eeffachuun haqa kee ti. Garuu, yaanni qajeelaa hin taane, seenaan seenaa sobaa irratti hundeeffame, guyyuma guyyaan irratti lallabaniif qajeelaa yookiin dhugaa hin ta’u.
Xumura irratti obboleessi keenya obbo Baran Bahan yaada baay’ee bareedaa waan
nuuf qoodeef galata guddaa qaba! Yaa leenca keenya akkanumatti itti nuuf fufi!
Jul 17, 13 at 6:50 pm
Obbo Fayyis Oromia, amma gara
afaan Oromootti deebitee isaan katabuun kee baayyee gaarii dha.
Akkanumatti akka itti fuftu ni abdanna. Waraqata kee isa kanaan duraa
sana keessatti waan dogoggora hedduu gooteef, amma isa keessaa gartokkee
fudhattee dhiifama gaafachuun kee cimina kee argisiisa. Garuu
dogoggoorri kee akka ati amma jettee fi akka namoonni keenya baayyeen
isaanii si qeeqatan jedhan sana, waa’ee “Shawaa” yookaan “godina”
wayiitii miti. Balleessi kee inni guddaan seenaa Oromoo fi seenaa
Amaaraa akka ati jettutti kan waggootii 300 tokko gochuu kee ti. Ati
abbaa barbaadde gaafa barbaadde Oromoo goota. Ummata barbaadde gaafa
barbaadde Kuush goota. Kanaaf isa Habashoota Kuushomsitu, isa afaan
Amaaraa Kuushomsitu, Oromoomsitu kana nurraa dhaabi! Oromiyaas “Great
Oromia” jechuun ishee nuti qabnu kana nu jalaa “Itoophiyaa” hin
taasisini. Barreeffama kee isa kanaa olii keessatti “Dr
Fikre seena kan waggaa 3000 barreesse, ani ammoo kan waggaa 300 duwwaan
ilaale, kanaaf yaadni keenyi lamaan wal hedduu wal hin fakkaatu.”
Obboleessa koo isuma waggaa 300 kanaatu dogoggora. Oromoonni “Shawaa”
ati jettuu kun matumaa seenaa waggaa 300 Amaaraa waliin hin qabani.
ati warra Habashaatti “Great Oromia” kee fe’uuf haqa maalii qabda?
Habashoota nuti warra Seemi ofiin jedhaniin, kan seenaan isaaniis akka
ta’an lafa kaa’u ati sanyii isaanii diddiirtee lakkii isin “warrta
Kuushi” jechuuf haqa maalii qabda? Kun hundumtuu mee Itoophiyaa kee,
eeyyee haadha biddeenaa kee irraa fagaachuu diduufi. Ati seenaa Oromoo
jajallifteef, Oromiyaan karaa walabummaa ishee irraa hin maqxu.
Walabummaan ishees ni bula, ni tura malee homaa hin hafu. Ati feenan
addoo (mask) Itoophiyaa sana uffattee adeemuuf haqa qabda. Garuu dhiitee
bariitee isa nu uffachiisuuf hin dama’ini. Waan hundaafuu waraqatan
kanaan dura akka ati seenaa Oromoo irratti of sirreessituuf erge tokko
kanaa gaditti maxxanseen jiraatii (“Ayyaantuu.com”, 11.07. 13, waraqaa
Baran Bahan jalatti) ilaali. Nagaan jiraadhu!
obbo Fayyis Oromia, yaa obbo Talents, yaa obbo Bilise, yaa obbo —,
yaa obbo! Barreeffamni kee kan duraan mataa “Oromo Talents in the
Habesha Political Clubs” jedhamu faa jalatta baafame, “ayyaantuu-com”, “gadaa.com”, “bilisummaa.com”
faa irratti baafamee ture. Garuu, ati torban kana guutuu waraqoota
garaa garaa kan namootiin keenya waa’ee garaa garaa irratti dhi’eefatan
irrattis akka nama yaada waa kennuutti “copy” gootee dhi’eessaa
jirta. Ati waan feete, akka feetetti dhi’eeffachuun mirga kee ti.
Garuu, yaada kee isa duraanii sana keessatti dubbii dhugaa irratti hin
Obboleessoo ati namoota Oromoo hin taane, maaf Oromoo taasisuuf carraaqxa? Ajaa’iba Rabbi “Minilik Caalaa”
jechuun faashisticha Amaaraa nuuf Oromoomsitee? Ati kana eessaa fidde?
Ragaa qabatamaa maalii of-harkaa qabda? Mangistuu Hayila Maaramis oduu
jette jettee yoo ta’e malee akka inni Oromoo tahe ragaa qabatamaa
Dabalees inni ati waayee Afaan Amaaraa “some
Oromo groups in Shoa seem to have accepted and developed Amharinya
since 1270 in relation to their acceptance of the Holy Book which has
been written in Ge-ez; so they fostered Amharinya as the new language
out of Ge-ez and Afaan Oromo; then it was given a moral upper hand being
the language of both the clergy and the royality; the Oromo elite, who
accepted the religion and such royality revered Amharinya at the cost of
Afaan Oromo; Minilik “Caalaa” of Shoa and co are the products of such
process; being the carriers of this moral upper hand, Amharinya speaking
Oromo groups started to feel superior to others and then tried to
“civilize” their Afaan Oromo speaking siblings south to them.”,
jette kun matumaa sirrii miti. Akkuma jirutti dubbii sobaa ti. Kun
seenaa Oromoo keessattis, seenaa Habashaa keessattis dhaga’amee hin
beeku. Seenaa haaraan uuma kan jettu yoo ta’emmoo kun haqa keeti. Garuu,
“kana anumatu uume” nuun jechuu qabda.
Amaaraa afaanota warra Seem keessa isa tokko. Firoomni/ warroomni isaa
afaanota: Tigree, Gi’iizii, Argobbaa, Guraagee, Adaree, Arabaa fi Hebruu
faa waliini. Afaan Oromoo immoo akkuma beekamu Afaanota warra Kuush
keessaa isa tokko. Obbolaan isaas Afaanota: Beejaa, Aga’oo, Afaar,
Somaalee, Hadiyyaa, Kambaataa, Gede’oo, Koonsoo, Arbooree, Alaabaa fa’i.
Afaan Amaaraa jechoota dhibba mee qaan, kuma meeqaan lakka’aman
Afaanota Kuush irraa keessumaa Afaan Oromoo fi Afaan Aga’oo irraa
ergifateerra. Afaan Oromoo irraa jechoota irgifachuun Afaan Amaaraa
damee Kuush isa hin taasisu. Kunillee waanuma afaanota mara keessatti
argamu. Ammallee waraqoota kee keessatti Oromoon Shawaa fi Amaarri
Shawaa seenaa dheera akka waan wajjin qabaniitti, akka waan empaayara
Itoophiyaa kana wajjin ijaarrataniitti lafa keessa. Kunis ajaa’iba
Rabbii ti! Baranammoo gurri keenya maal dhaga’uuf adeema laataa?
Oromoonni Shawaa ati jettu kun akkuma Oromoota biraa “Minilik Caalaa” kee sanaan dirree duulaatti mo’amanii Itoophiyaa kee ishee ati “Great Oromia”
jechuun kiristinnaa kaaftu sana jala galani. Goobana Daccee kunis
Oromoo Shawaa sana mara dhiisii gosumasaa Abbichuuyyuu hin wakkalu.
Gantuun eenyumayyuu wakkaluu hin danda’u. Oromoon Abbichuus akka “Minilik Caalaa”
kee sanaan dirree duulaatti cabe beektaa laataa? Adaraa kee ati utuu
waa’ee tokko irratti waa hin dhi’eessin dursiitii seenaa isaa qoradhu!
Ati akkuma amma kanaa olitti obbo “Name”-iin
jette akka naan hin jenne adaraa. Isan kanaa olitti dhi’eesse hundumaa
waraqatoota kee isaan maqaa garaa garaa qabattee baafte sana keessa
ilaali! Akkuman irrantti jedhe yaada barbaadde, waan barbaaddee irratti
dhi’eeffachuun haqa kee ti. Garuu, yaanni qajeelaa hin taane, seenaan
seenaa sobaa irratti hundeeffame, guyyuma guyyaan irratti lallabaniif
qajeelaa yookiin dhugaa hin ta’u.
irratti obboleessi keenya obbo Baran Bahan yaada baay’ee bareedaa waan
nuuf qoodeef galata guddaa qaba! Yaa leenca keenya akkanumatti itti nuuf
Jul 17, 13 at 8:26 pm
seenaa Fayyis barreesse jibbuu fi arrabsuu kan caalu bar seenaa ati beektu himuu dha. Inni waan beeku barreesse, ati ammoo kan kee nuuf ibsi; lelawu neger hulu, tirfu gunci malfat newu! Just by rejecting his idea, you can not be a better sabboonaa than Fayyis. Come up with better opinion than his ideas! Fault finding is the very cheapest job, which can be done even by the imbeciles! Better brains do concentrate on the process of solution seeking!
Jul 18, 13 at 12:01 am
Barreeffama kiyyaaf deebii naa kennuu keetiif galatoomi,
ulfaadhu. Beekaa tokkorraa kan eegamu, beekees haa ta’u otuu hin beekin, waan
balleesse sana amanee fudhachuu fi dhiifamallee gaafachuu dha. Waayee kana
atiis ibsitee jirta; kanaafis galata fi kabaja qabda. Qabiyyee barreeffama
keetii ilaalchisee, gaafii kee “Seenaan Oromoo Akka Janus Fuula Lama Qabaa
Laata?”kan jedhuuf, waayee seenaa warruma beekumsa fi ogummaa seenaa qabaniif
dhiisee; garuu qabxiilee lamarratti gabaabumatti waa jechuun barbaada.
Tokkoffaa, sababuma fedheenuu haa ta’u maqaa
kutaa tokkoo (asitti irra deebi’uu hin barbaadu) fi maqaa namoota kutaa sana
keessaa akka fakkeenyatti kaasuu keetiif, amma irra deebi’ee waayee kana asitti
kaasuun bu’aa hin qabu. Maaliif yoo jedhame, kun rakkooratti rakkoo biraa
uumanii babal’isuu fi diinaaf qaawwa uumuu ykn karaa baasuu yoo ta’e malee,
waayee kanarratti beekumsa, dandeettii fi yeroos fixuun uummata Oromootiif waan
bu’aa fiduu miti jedhee waanan amanuufi.
Lammaffaa, Oromoota kennaa fi dandeettii (talent)
qabani fi mooraa Habashootaa keessatti dalagan ilaalchisee, ammas ejjannoon
kiyya hin jijjiiramne. Namootni kun sababoota adda addaatiin waan Habashoota
tajaajilaniif, tarii walumatti qabamanii isaan hundaa akka yakkamtootaatti (criminals)
ilaaluun sirrii ta’uu dhabullee, hanga fedhii saba Oromoo faallessanitti, hanga
kaayyoo QBOtti gufuu ta’anitti, akka gantuu fi galtuutti ilaalamuurraa waan
hafan natti hin fakkaatu. Kun ilaalcha mataa kootii ti.
Kan biraa, yeroo duraatiif barreeffama Afaan
Oromootiin dhiyeessuun kee baay’ee na gammachiise. Otuu dandeettii akkanaa
qabduu, hanga har’aattuu Afaan ormaa qofaadhaan barreessuu keetiif si komadhee
jira. Yoo nuti Afaan keenya daganne, eenyutu nuuf yaadata? Yoo nuti isa
guddisuuf hin carraaqne eenyutu nuuf guddisa? Kanaaf waayee kana itti yaaduun
barbaachisaa dha. Ejjannoon kiyya, Afaan keenya dursa argachuu qaba kan jedhu
dha. Kanaafuu dhaadannoon kiyya “OROMUMMAATU DURSA” kan jedhu fi akkuma
dhaadhannoo yeroo ammaa “ANI DURA OROMOO DHA” kan jedhu ta’a. Obboo Fayyis, mee
gaafii tokko si gaafadheen yaada koo xumura. Ati dura Oromoo dha moo Itoophiyaa
Galatoomi, jabaadhu! Hamma walitti deebinutti
Jul 18, 13 at 1:40 pm
thanks for the feedbacks; I really appreciate. Let’s discuss on issues; speculating each other’s intention can’t bring us any solution. Just let’s concentrate on the messages, not on the messangers.
atis gltm! Gaaffii kee dhuma irratti nagaafatteef deebi’iin koo: ‘I am Oromo and Oromian first! I hope you will not ask me next: “which Oromia? The Core-Oromia or the Great-Oromia?
Jul 23, 13 at 10:24 am
“—while the group of Oromos who penetrated historic Ethiopia or Abyssinia were participating in the making of history in the North, the bulk of the Oromo population were living in the South, East and West independently or with little contact with North Ethiopia. This greater part of the Oromo population became the victim of Menelik’s conquest in the last quarter of the century. The irony of Oromo history therefore is that they were among of the conquerors and the conquered, that they produced kings and queens while at the same time reduced to ‘gabbar’ (serf) and tenants alienated from the land of their ancestors.”